Zuva Rekuti Dare Ripe Mutongo Waro paNyaya yaChin'ono Rinosvika, Asi Mutongi weDare Anoshaikwa Mudare
Hopewell Chin'ono (Columbus Mavhunga/VOA)
Mutori nhau, Hopewell Chin’ono, achamira kusvika nemusi weChitatu svondo rinouya kuti anzwe kuti dare richapa mutongo upi pachikumbiro chake chekuti dare ramajisitireti rirase nyaya yaari kupomerwa.
Chin’ono ari kupomerewa mhosva yekuburitsa mashoko emanyepo pandemutande rake reTwitter, inova nyaya yakaraswa nedare repamusoro.
Asi yakadzoka mudare mushure mekunge muchuhusi mukuru wenyika, VaKumbirai Hodzi, vapikisa mutongo weHigh Court.
Nyaya iyi yatadza kunzwikwa mudare nhasi mushure mekunge mutongi wenyaya iyi, Amai Vongai Muchuchuti Guvuriro, avo vainge vatara zuva ranhasi kuti vape mutongo panyaya iyi, vatadza kuuya kudare vamwe vavo vachiti vange vakabatikana nerimwe basa.
Zvichakadai, magweta aChin’ono anosanganisira, VaMtisi, Amai Beatrice Mtetwa, VaDoug Coltart nevamwe vange vauya kunzonzwa nyaya iyi mumiriri weZengeza West muNational Assembly, VaJob Sikhala, vavhiringidzwa nemapurisa panze padare vachirambidzwa kutaura nevatori venhau pamberi pedare iri.
VaMtisi varatidzawo kusafara nekuita kwemapurisa nhasi.
VaSikhala avo vanovewo gweta, vashorawo kuita kwemapurisa uku.
Hatina kunzwa divi revakuru vepamatare ekuRotten Row kuti sei mapurisa atora matanho aatora, kanawo kumutaruri wemapurisa, VaPaul Nyathi.
Asi mumwe mushandi wepamatare aya ati kutanga svondo rino magweta anobvumidzwa kutaura nevatoriu venhau kunze kwedare kana kunzvimbo dzavanopaka motokari dzavo kwete pamberiu pedare.
Mutauriri wesangano remagweta anomirira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaKumbirai Mafunda, vaudza Studio 7 kuti magweta ane kodzero yekutsanangurira vatori venhau neveruzhinji zvinenge zvaitika mudare.
Mune imwewo nyaya yange iri mudare nhasi, kutongwa kwenyaya yemudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe, Allan Moyo,uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kubvisa hurumende nechisimba pamwe nemumwe wechidiki weMDC Alliance, Makomborero Haruzivishe, kwatadza kutanga nhasi sezvo vachuchusi vange vasati vagadzirira.
Nyaya yave kutarisira kunzikwa mangwana.